अपहरणपछि हत्या गरेर पुरिएका निशानबारे घरबेटीले दिए यस्तो बयान ! — Sanchar Kendra
अपहरणपछि हत्या गरेर पुरिएका निशानबारे घरबेटीले दिए यस्तो बयान !
निशानलाई अपहरण गर्नेहरूको अचानक पौने ९ बजे आमा चमेलीको मोबाइलमा फोन आएपछि घटना सार्वजनिक भएको थियो । अपहरणकारीले ‘तिम्रो छोरा हाम्रो कब्जामा छ, ४० लाख रुपैयाँ तयार पार’ तत्कालै चमेली खड्काले गुहार मागिन् । छिमेकीहरू जम्मा भए । प्रहरीलाई खबर भयो । तर, रातभरिको प्रयासबीच पनि बालक भेटिएनन् ।
काठमाडौंको काँडाघारीस्थित हाइल्यान्ड स्कुलमा कक्षा ६ मा पढ्ने ११ वर्षीय निशान खड्का अपहरणमा परेर ज्यान गुमाउनु परेको छ । विविभन्न जिल्लाहरूमा बलात्कार र हत्याका घटनाले तिब्रता पाइरहेको छ ।
अपहरणकारी गोपाल र उनका साथी अजय तामाङले सानोठिमीस्थित आफ्नो डेरामा राति ढिलो फर्कने जानकारी गराएका थिए । उनीहरू राति १२ बजेमात्रै फर्किए ।
अपहरणकारीले डेरा लिएर बस्ने घरका घरमालिक श्याम लबट हुन् । आफ्नै घरमा बस्ने डेरावालले नयाँ बन्दै गरेको घरको जगमा बालकको शव गाडेपछि उनी आत्तिएका छन् । घरबेटीसँग अपहरणकारीहरुको गतिविधि र घटनास्थलका बारेमा सोधखोज गर्दा लबटले यसरी वयान गरे-
उनीहरु भाडामा बस्थे । लगभग ६/७ महिनादेखि बसिरहेका थिए । तल भर्खर बनाएको नयाँ घरमा बस्ने ठाउँ पनि थियो । तर, ट्वाइलेटको असुविधा भएकाले ठेकेदारहरु बसेका थिएनन् । म कामले धनगढीतिर थिएँ । राति साढे २ बजेतिर आइपुगेको थिएँ । आएर चाउचाउ बनाए खाएँ अनि सुतें । साढे ३ बजेतिर सुतेका थियौं ।
राति माथि आउँदा जुत्ता सुकाएको देखेर मैले कराएको थिएँ । धत् मान्छे काहिँ, कतै जान लागेको हुन्छ । काहीँबाट आएको हुन्छ, यसरी जुत्ता उल्टो राख्ने होइन । तर, कोठाभित्र उनीहरु चुकुल लगाएर सुतिसकेका रहेछन् । बिहान अचानक यस्तो भयो ।आज बिहान छोरालाई स्कुल पुर्‍याउन लाग्दा अचानक १५/२० जना मान्छे आए । मलाई त केही पनि थाहा छैन । को हो, के हो, खास कुरा भन्नु भनेपछि मैले म घरबेटी हुँ, के हो मलाई भन्नुपर्‍यो नि भनेँ ।
घरमा भाडामा बस्नेले केही गरे कि ? अलि शंकाको घेरामा परेका छन् उनीहरु । तपाई एकछिन बाहिरै बस्नु भने । बिहान ९ बजेर १० मिनेट जति जाँदा आज बिहानको कुरा हो यो । राति के भयो, मलाई केही थाहा थिएन ।
लगभग ३ वटा गाडीमा मानिसहरु आएका थिए । निस्किनेबित्तिकै १९/२० जना माथि रुममा आए । तपाईलाई केही हुँदैन टेन्सन नलिनु भने ।
पछि एकदम पिटे क्या उनीहरुले । अनि मैले लेडिजलाई सोधें- के हो म्याम ? हिजो बच्चा अपहरणको केश छ, त्यही भएर आएको भनिन् । धेरै पिट्यो क्या । अनि हामी माथि आयौं ।
एकैछिनमा सबै मान्छे भेला भइसकेका रहेछन् । बुढीले चाहिँ यसरी राखेर हुँदैन । घरमा । तपाईँहरु सिभिलको प्रहरी हो भने समात्नुस् । चौकीमा लगेर जे गर्नुस् भनेपछि त्यहाँ केही गरेनन् ।
बुबा बारीमा जानुभएको थियो । प्रहरीहरुलाई देख्नुभएछ । एकजना सिभिलको दाइ खाल्डो खन्न थाल्नुभयो । बुबा आत्तिएर हडबडाउँदै कसले घरछेउमा खन्दै छ भन्दै आउनुभयो । उहाँ पुलिससँग कहिल्यै फेस नगर्नु भएको मान्छे । त्यसैले धेरै आत्तिनुभएको थियो ।
बिहान बुबा आउँदा मात्रै मैले थाहा पाएको थिएँ । बुबा बारीमा जाँदा बुबा यता नबस्नुस् हामी जग चेक गर्न आएको, भूकम्प प्रतिरोधी छ/छैन भनेर भनेका रहेछन् ।
म तल गएर हेर्दा तपाई नजानु, त्यहाँ शंका छ भन्यो । तर, त्यहाँ शव छ भनेको थिएन । केहीवेरमा शव भेटियो । हाम्रै साइटमा के गरेको यिनीहरुले ? धेरै तनाव भयो । कहाँबाट मेरो घरमा….?